Home Ulo oru Europe Daniel Sturridge nwa akụkọ akụkọ nke na-emeghe akụkọ ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Onye Nyocha". Nwa anyị Daniel Sturridge Akụkọ ya na akụkọ na-enweghị isi akụkọ eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Daniel Sturridge Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, hapụ Amalite.
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Ndụ mbido
A mụrụ Daniel Sturridge na 1st ụbọchị September 1989 na Grace Sturridge (nne) na Michael Sturridge (nna), ma ndị Jamician.
O toro na Hockley, Birmingham. Ọ bụ ebe ọ na-agaghị echezọ ma ọlị banyere okwu egwuregwu na ebe ndị dị na mpaghara, na-egwuri egwu gburugburu ụlọ ya na ụlọ ya na ụlọ.
Nwa ọ bụla nọ n'ógbè ya nwere mmasị n'ebe ọ nọ.
Little Daniel Sturridge: Nwa nwoke ahụ na obi onye ọ bụla
Daniel hụrụ Hockley n'anya n'ihi na ọ bụ ebe dị mma ị ga-ebi nakwa ebe ọ ga-enye ya ohere maka ebe ọ nọ taa.
N'ịbụ onye tolitere, nwa okorobịa Daniel nwere ndị nne na nna na-echebe ya. N'okwu ya; ...."Hockley nwere ihe mpụ n'ihi ya mama m achọghị ka m gaa ebe ahụ, papa m bụ otu. M ga-abanye n'oge ụfọdụ ka ọtụtụ ime ihe ike gbara anyị gburugburu. Nwanne m nwoke nke okenye, Leon, etinyeghị aka na ime ihe ike ọ bụla, ọ chọpụtakwara na m hapụrụ ụdị ndụ ahụ dum. Ọ dị mkpa ịghọta na ị nwere ike ịghọ ihe na-eme ihe ọjọọ. Ana m ekele Chineke na enwere m ike ịpụ na ebe ahụ ma mee ihe n'onwe m. "
N'ịbụ onye na-abịa site na agbụrụ ezinụlọ, Daniel maara na papa ya na ndị nne na nna ya chọrọ ka ihe nketa ha nọgide na-aga n'ihu. Ọ dị njọ, o nwere onye nkụzi nhazi oge na onye nlekọta ha. Nna ya, Michael mepụtara obi ụtọ maka igosi vidiyo vidiyo nke Pele ya. Ọ bụ nke a nke mbụ nwetara Daniel mmasị na football.
N'okwu nke Daniel ..."Papa m kụziiri m ọtụtụ n'ime ogige ahụ, anyị na-achụpụ cones na nkịta mgbe niile na-achụ anyị. O gosiri m ọtụtụ vidio Pele. Ọ ga-egosi m nkà na m ga-aga n'ihu ubi na-agbalị ime ha. "
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Ọrụ na Nchịkọta
Sturridge malitere ịrụ ọrụ mgbe ọ dị afọ isii na steeti egwuregwu Cadbury. Nna ya na nwanne ya nwoke bụ okenye nyere ya ọzụzụ. Nke a nyeere ya aka ịgba chaa chaa.
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ: Oge Ochie
Ọ na-eji oge 1995 / 1996 dum mee ihe na klọb ahụ tupu a hụ ya mgbe ọ dị afọ asaa site n'aka ndị ntorobịa ntorobịa nke Aston Villa. Ọ hapụrụ Villa afọ anọ mgbe nke ahụ gasịrị ka ọ kwaga Coventry City, site na ebe o sonyere Manchester Academy Academy na 2003, 13 dị afọ XNUMX.
N'afọ sochirinụ, ọ bụ onye na-eduzi akara na onye ọkpụkpọ na-egwu oge (naanị onye ọzọ ga - enweta nke a bụ onye na - agba egwú Argentine Carlos Tevez) dịka City meriri Nike Cup, ihe kachasị n'ụwa kachasị n'okpuru 15.
Site na mmalite nke oge 2006-07, Sturridge malitere ịmụrụ ya na ndị mbụ obodo.
Na oge 2007-08, Sturridge ghọrọ onye ọkpụkpọ egwuregwu ọ bụla ị ga-erite na Cup Cup nke ndị ntorobịa, iko FA na Premier League n'oge ahụ. Nke a bụ ihe ndekọ nke na-agaraghị emetụta ya taa.
Ná ngwụcha nke oge 2008-09, ndị Manchester City kwadoro Sturridge dị ka Manchester City Young Player nke Season, bụ nke o ji nye ezinụlọ ya na nna nna ya Dean onyinye ahụ.
Mgbe Sturridge kwụsịrị na Manchester City nwụrụ, ọ bịanyere aka na Chelsea na nkwekọrịta afọ anọ na 3 July 2009. Na 31 January 2011, Sturridge kwetara ịbanye na ndị Bolton Wanderers na ihe ịgbazinye ego ruo mgbe ngwụcha oge. O mere mmetụta na Bolton.
Na 2 January 2013, Sturridge kwụsịrị njem site na Chelsea ruo Liverpool, na-edebanye aka maka nkwekọrịta ogologo oge maka ụgwọ a na-akọwaghị na mpaghara £ 12. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu ugbu a bụ akụkọ ihe mere eme.
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Ndụ Ezinụlọ
Daniel Sturridge sitere na ezinụlọ ndị bara ọgaranya. Ọ bụ onye Jamaica, nne na nna ya ochie bụ Jamaica dịka Raheem Sterling.
DAD: Nna ya, Michael Sturridge bụ ndị ọkachamara n'ịmara egwuregwu tupu a mụọ ya.
N'okwu Daniel, ... "Mgbe m na-etolite, ọ bụ ya kụziiri m ihe ma nyere m aka ịghọ ihe m bụ taa. Na-enweghị nkuzi na enweghị nghọta ya na oge na oge ọ na-etinye na m, m gaghị abụ onye ọkpụkpọ na m taa. Mụ na nwanne m nwoke, ọ kụziiri m ihe niile m maara.
Michael Sturridge nwanne bụ Saịmọn, Dean, David na Derek na Carl Sturridge. Nwanne ya bụ Ava Sturridge-Packer CBE.
Nne: Mama Daniel lekwasịrị anya na agụmakwụkwọ m. Ọ chọrọ ka ọ na-elekwasị anya n'ụlọ akwụkwọ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ. Nke ahụ buru ibu maka ya.
Daniel Sturridge na Nne - Grace Sturridge
Ọ bụghị nanị na Daniel nwere ike ịmepụta oké mmiri ozuzo na egwu nke ụbọchị ndị a, ma site na pitch ọ bụkwa obere aka aka na kichin, nke mere na ezinụlọ Sturridge meghere ụlọ ahịa Caribbean ha Birmingham, ebe a mụrụ ya na ebe nne na nna ya bi.
Ọ ga-abụkwa nne mama Sturridge, onye ọ na-ekwu na-emetụta ịhụnanya nke ya maka ezigbo nri na nri.
Ebube: Sturridge bụ nwa nwanne nke ndị na-agba ọsọ Dean na Simon Sturridge.
Nwanne nna Daniel, Dean gara n'ihu ruo afọ iri na Derby County, afọ ise nke e ji mee ihe na Premier League. Uncle Simon wee pụta maka Stoke City, ebe Daniel Daniel papa na Finland. Ma Dean, Simon na Michael Sturridge (nna Daniel) niile nwere ọrụ ọrụ ha n'otu oge.
Dị ka Daniel ..."Ha mere ka m nwee ohere ma na-elegide ha anya mgbe m bụ nwata. Enwere m obi ụtọ ịhụ ka nwanne m nwoke na-egwu maka Derby na nwanne m nwoke nke ọzọ na-egwu Stoke. Anọ m na-ele papa m na-egwu na Betamax na-edekọ n'ụlọ ma gosi m egwuregwu ochie si mgbe ọ na-egwu na Finland. Ọ gbatakwara ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ dị mma. "
NNE: Daniel nwere nwanne nwoke tọrọ ya aha ya bụ Leon Sturridge. O nweghị mmasị na football site na ụbọchị. Ọ bụ nwa mbụ na nwa Michael na Grace Sturridge.
Daniel kwuru na ọ dịghị mgbe nwanne ọ bụla na-emegide ya na Leon. N'okwu ya ..." Leon anọwo na-akwado 100%. Enweghị ekworo. Na nke ahụ bụ na ihe niile, ọ bụghị naanị football. Enweghị ekworo na ezinụlọ m na nke ahụ bụ otu ihe ndị nne na nna m na-akụziri anyị mgbe niile. A kụziiri anyị mgbe nile iji welite ma wetara otuto ma gbalịa inyere ibe anyị aka inwe ihe ịga nke ọma; ghara ikwo ekworo n'etiti onwe gi "
SISTER: Daniel Sturridge nwere nwanne nwoke okenye nke aha ya bụ Cherelle Sturridge. Ọ bụ afọ 4 karịa ya. N'okpuru ebe a bụ foto Cherelle Sturridge na John Terry.
Nwa nwanne okenye Daniel Sturridge - Cherelle Sturridge na John Terry
EGO: Daniel nwere umu nne nna 3 n'aha nke Warren, Jordan na Ellisha Sturridge.
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Ndụ mmekọrịta
Na mbụ, ọ dịghị mgbe Daniel na-enwe mmekọrịta siri ike. Ọ na-emeso ndị Fans ya foto na vidiyo na Instagram, ma ọ dịghị mgbe ọ na-ese onyinyo ya na nwanyị n'akụkụ ya. Ọhụụ Ya-Pitch na-adịghị njọ dị ka nke Sergio Ramos na Gonzalo Higuane.
Nke a bụ otú o si lee ndụ mmekọrịta ya anya dị ka ... .."Ọ ga-amasị m ịmalite ezinụlọ nke m. Amaghị m ụdị nna m ga-abụ, ma olile anya na m ga-adị mma. Na olileanya na nwa m ga-enwe ike ịgwa m ihe ọ bụla. Nke ahụ bụ ụdị onye m bụ, nke ahụ bụkwa ụdị mmekọrịta m na-atụ anya ka mụ na nwatakịrị m.
Mgbe e mesịrị, nke a bụ ihe mere !!
Ndị na-egwu egwu juru ebe ọ bụ na Daniel Sturridge weere Twitter iji kọwaara ya mkpa nwanyị dị na ndụ ya. Sturridge bụ onye a maara maka ịkekọrịta ọtụtụ ndụ ya na mgbasa ozi ọha na eze, yana mkpakọrịta ya na ndị na-eso ụzọ ya mgbe niile gwara ụmụazụ ya:
Obere oge mgbe tweeting, ụfọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi gosipụtara mmekọrịta ya na ndị inyom nwere ike ịchọrọ ka ya na ya nwee mmekọrịta siri ike. Ụfọdụ n'ime ya na-agụ dị ka ndị a;
-He ọ dị mma nke ukwuu - Ọ na - ekwe ka nke a mee ka ị daa, na - akpa ya dị ka onye na - azụ onwe ya!
-He nwere ike inweta ego gị na Subway, mgbe ọ bụ onye nnọchianya ha.
-O gosipụtara na ya nwere ezi obi ọchị mgbe ya na ndị so na Liverpool FC player Jordon Ibe na-ekere òkè.
-Ọ na-ebi ndụ ndụ n'etiti kpakpando dịka Tinie Tempah, Pharrell Williams na Drake ka ị nọrọ na ndepụta ndị ọbịa dịka ya na otu!
Ọ bụ supermodel Jourdan Dunn nke mesịrị merie obi ya. Jourdan bụ onye ejiji ejiji na onye omeeji. A chọtara ya na Hammersmith Primark na 2006 wee bịanye aka na Storm Model Management na London n'oge na-adịghị anya. Ọ malitere ịpụta na ọsọ ọsọ ụwa na mbido 2007.
Jourdan Dunn na Daniel Sturridge enwewo ọganihu dị nso ebe ọ bụ na ha malitere ịlụ. Ha na-eme ka mmekọrịta ha dị jụụ ma e wezụga maka oge dị ka nke a.
Daniel Sturridge Nwanyị
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Isi nke ememe mgbaru ọsọ
Ndị mmadụ kwuru na Daniel Sturridge nwere ihe dị ka Jagger.
Ọzọkwa, n'ihe niile ndị mmadụ chọrọ ịmara banyere onye ahụ gburu ya, ọ bụ ma eleghị anya mmalite ma ọ bụ ihe ọbịbịa mgbakọ mgbaru ọsọ Jagger ọ maara. Sturridge nwere mmasị na-eme usoro ịgba egwú ndị Egypt na ndị na-agba ya.
Mba England na-akọwa n'otu oge nyochaa magazin GQ: "Ọ bịara mgbe mụ na nwanne m nwoke na ụmụnne m nọ n'ụlọ m. Anyị na-enwe ihe nkwụsịtụ ma na-akpọ egwu ụfọdụ ma emecha m ịgba egwú. Ọzọ, m mechara mee ya na ụlọ oriri na nkwari abalị ma mgbe ndị mmadụ dị ka: 'I kwesiri ime ya dika ememe,' mgbe ahụ ọ bụ ụdị nke a rapaara. "
Ọ bụ mmadụ ole na ole na-akwa ya ọchị. A na-ahụ ihe atụ n'okpuru.
N'ihe eji ya mee ihe, a na-eji mbụ egwuri egwu Sturridge Jagger na 2004 mgbe ọ nwere egwuregwu U15s megide Barcelona na Nike Premier Cup. Mgbe ahụ 14 afọ ahụ hụrụ azụ nke ụgbụ ahụ, ma soro ya na egwu egwu na-echefu echefu nke o mere maka oge mbụ na pitch. Ọ bụ ezie na ọ na-ele obere ntakịrị na nzuzu n'oge ahụ. Daniel ka mma na ya.
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Uwe Akwa Uhie
Kwụsị pitch ahụ, Sturridge nwere ọdịiche dịgasị iche iche nke ọdịmma ya iji nọgide na-arụsi ọrụ ike. Ọ nwere nnukwu agụụ maka ejiji na nwa. Ọ na-achọpụta na ọ na-esi n'ichepụta ihe nkedi oji kachasị mma n'oge niile.
Karịsịa, nke ahụ pụtara na ọ bụ ndị ọzụzụ ọhụrụ kachasị.
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Ozugbo a Derby County na Arsenal Fan
Sturridge na-akwado Derby County mgbe ọ dị obere n'ihi na nwanne nna ya, bụ Dean, gwuru ha. Ma ozugbo Dean hapụrụ, Sturridge gbanwere nkwado ya na Arsenal.
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Religion
Sturridge bụ Onye Kraịst. Mgbe o meriri Premier Player Player nke ọnwa, Sturridge kwuru, sị, "Ana m eme ihe niile [site na] Kraịst onye na-ewusi m ike."
Okpukpe na-arụkwa ọrụ siri ike na ndụ 24, Sturridge bụ Onye Kraịst nwere obi ebere, dị ka ọhụụ si na mbara igwe na-ekele Chineke na onye ọrụ ahụ na-eme mgbe ọ bụla ọ hụrụ azụ nke ụgbụ maka ndị Reds.
"Echere m na m nwere okwukwe na Chineke, na-ekpe ekpere nke ukwuu, na-agbasi mbọ ike na ngalaba ọzụzụ, ma na-ekwupụta onwe m, na-egwu egwuregwu ebumpụta ụwa m na-egwu ọnọdụ m," Sturridge gwara C Sport's World Sport mgbe ọ na-anwa. ịkọwa ụdị ọkụ ya na-acha ọbara ọbara n'oge na-adịbeghị anya n'ihu mgbaru ọsọ.
Daniel Sturridge Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Akụkọ -Onye Na-enye Obi Ụtọ
Sturridge na-arụsi ọrụ ike, na-enyere ndị na-eto eto aka itinye aka na football. Na 2012, mgbe ọ na-egwu Chelsea, ọ na-etinye ego maka 50,000 rue Street League, ọrụ ebere a raara nye ndị na-enweghị enyemaka na ndị Europe na-aga na football.
N'oge okpomọkụ 2013, Sturridge meghere ntọala ntọala ya nke a na-akpọ ya na Portmore, Jamaica, na iji ya nyere ndị na-eto eto aka ịbanye egwuregwu na ntụrụndụ.
Ọ nwekwara ụlọ ọrụ Sturr Class Entertainment record.